तपाई मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कनुभयो ? सावधान अब कारबाहीमा परिन्छ ।
गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मास्क नलगाई हिड्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
असार १ गते लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति लिएसँगै मास्क, स्यानिटाइजर तथा अन्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नागरिकले स्वास्थ्यका सामान्य नियम पनि पालना नगरेको पाइएकाले सो निर्देशन दिइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् सहसचिव केदारनाथ शर्माले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, मन्त्रालयले सोमवार ७७ वटै जिल्लामा लागू गर्नेगरी मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले असार १ गतेदेखि सरकारी कार्यालय तथा व्यापार व्यवसाय खुला गरेको छ । विद्यालय तथा सार्वजनिक यातायात खुलाइएको छैन । यद्यपी शहरी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रमा पनि भीड बाक्लिंदै गएको छ । भीडभाड बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै मन्त्रालयले अनिवार्य कामबाहेक अन्य अवस्थामा बाहिर ननिस्किन पनि आह्वान गरेको छ ।
चीनलाई हेर्ने विषयले मोदीको शक्तिशाली सरकारमा दरार : आफ्नै रक्षामन्त्रीसँग शक्ति संघर्ष ?
सरकारले गर्‍यो नार्कमा नयाँ नियुक्ति र नेपाल-इजरायल कृषि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता